ဟောင်ကောင်နှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်ရှိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကို -
အကောင်းဆုံး Residency များအတွက်ကိုယ်စားလှယ်များ Hong Kong ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့်ရှေ့နေများ Residency by Hong Kong နှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစား Hong Kong ရှိ Residency အစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
ဟောင်ကောင်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များ၏နေထိုင်ခွင့်သည်ဟောင်ကောင်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှ Residency၊ ဟောင်ကောင်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဒုတိယနေထိုင်ခြင်း၊ နေထိုင်ခွင့်၊ ဟောင်ကောင်တွင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ အမြဲတမ်းနေထိုင်မှုဟောင်ကောင်တွင်နေထိုင်ခြင်း၊ ယာယီနေထိုင်မှုဟောင်ကောင်တွင်နေထိုင်ခြင်း၊ နေထိုင်ခွင့်သည်ဟောင်ကောင်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်၊ Residency သည်ဟောင်ကောင်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်မှု၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။ ဟောင်ကောင်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဟောင်ကောင်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒုတိယ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဟောင်ကောင်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဟောင်ကောင်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဟောင်ကောင်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဟောင်ကောင်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဟောင်ကောင်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်သည် , ဟောင်ကောင်ဒုတိယပတ်စ်ပို့၊ ဟောင်ကောင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ၊ ဟောင်ကောင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ဟောင်ကောင်တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဟောင်ကောင်ဒုတိယပတ်စ်ပို့၊ ဟောင်ကောင်သံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒုတိယလက်မှတ် ဒုတိယဟောင်ကောင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဟောင်ကောင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ဟောင်ကောင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ၊ ဟောင်ကောင်ရှိရွှေဗီဇာ၊ ဟောင်ကောင်ရှိရွှေဗီဇာ၊ ဟောင်ကောင်ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ ဟောင်ကောင်ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဟောင်ကောင်ရှိဗီဇာ၊ ဟောင်ကောင်ရှိဒုတိယရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဟောင်ကောင်ရှိရွှေဗီဇာ၊ ဟောင်ကောင်ရှိနိုင်ငံသားနှင့်ရွှေဗီဇာ၊ ဟောင်ကောင်ရှိနေထိုင်ခွင့်နှင့်ရွှေဗီ၊ ဟောင်ကောင်ရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား၊ ဟောင်ကောင်ရွှေဗီ ဟောင်ကောင်ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ဟောင်ကောင်၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် Hong Kong အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု: အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1,300,000
'မွှေးကြိုင်သောဆိပ်ကမ်း' ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသောဟောင်ကောင်သည်သွက်လက်။ အားတက်ဖွယ်ကောင်းသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ မျက်မှောက်ခေတ်မြင့်မားသောမြင့်တက်မှုများနှင့်ကြီးမားသောတောင်များများ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောရောစပ်မှုကဤအစက်အပြောက်ကိုတကယ့်ကိုထူးခြားဆန်းကြယ်သောအရာဖြစ်စေသည်။
ဟောင်ကောင်ကို '' အရှေ့အနောက်နှင့်တွေ့ဆုံ '' ပြီး၊ ဟောင်းနှင့်အသစ်သည်အခြားတစ်ခုနှင့်တစ်ခုတည်ရှိရာနေရာတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ ၎င်း၏နံ့သာပေါင်းနှင့်ပြည့်နေသောသန့်ရှင်းရာဌာနများ၊ နယ်နိမိတ်အဆောက်အအုံများနှင့်ဖန်ထည်နှင့်သံမဏိမြင့်တက်မှုများသည်ယခင်ကပြုလုပ်ခဲ့သောစည်းဝေးကြီးများနှင့်တက်ကြွသောအခမ်းအနားများနှင့်အတူဟောင်ကောင်ကိုလူမှုရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့သည်။
ဟောင်ကောင်သည်အာရှတိုက်အတွက်တွန်းအားဖြစ်သည်။ အချိန်တိုတိုအတွင်းဖိလစ်ပိုင်၊ သီရိလင်္ကာ၊ ထိုင်း၊ စင်္ကာပူ၊ ဂျပန်၊ တိုင်ဝမ်၊ မလေးရှားစသည့်ဥပမာများကိုသာဖော်ပြရန်သင့်တော်သောခရီးများကိုသင်ရနိုင်သည်။ တစ်နှစ်ကိုဘဏ်လုပ်ငန်းခွင် ၁၅ ကြိမ်ခန့်ရှိခြင်းဖြင့်သင်သည်သီတင်းပတ်ကုန်ရက်ကိုဗီယက်နမ်မှဘာလီအထိဘော်နီယိုအထိအားကစားများ၌တန်ဖိုးထားနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကပိုဖော်ပြလိုပါသလား?
ဟောင်ကောင်သည်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးသောမြို့ပြခရိုင်များထဲမှတစ်ခုရှိသော်လည်းမည်သို့ပင်ဆိုစေကမ္ဘာပေါ်တွင်ရာဇ ၀ တ်မှုအနည်းဆုံးသောနိုင်ငံများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မကြာခဏကမ္ဘာဂြိုဟ်၏လုံခြုံမှုအရှိဆုံးမြို့တော်အဖြစ်ပုံဖော်ခံရပြီးရာဇ ၀ တ်မှုနိမ့်ကျမှုကြောင့်ဟောင်ကောင်သည်သင့်အားအခြေချရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်လာသည်။
အနည်းငယ်သိသည်မှာဟောင်ကောင်သည်မြို့ပြတောကြီးတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ၊ ကျယ်ပြန့်သောကျယ်ပြန့်သောနေရာများစွာရှိသည်။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဘုံခမ်းနားထည်ဝါသည့်ဒေသများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောမြို့နှင့်သဘာဝတရား၏ဤဆက်စပ်မှုသည်အမှန်တကယ်ပင်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ ၁၅ မိနစ်အတွင်းမှာသင်ဟာမြို့ပြင်နဲ့လှပသောပင်လယ်ကမ်းခြေ၊ တောင်တန်းများမှာသင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုမှအေးဆေးစွာရှူရှိုက်မိပြီးဝေးလံသောကျွန်းများ၊ သိလိုစိတ်ရှိသောမြို့များသို့မဟုတ်တောင်တက်လမ်းကြောင်းများကိုစူးစမ်းပါ။
ဟောင်ကောင်ကို ၇၀% ပတ်လည်စိမ်းလန်းသောနေရာများ၊ ကျွန်း ၂၅၀ ကျော်နှင့်တောင်စောင်း ၃၀၀ ကျော်တွင်ပြုလုပ်ထားသည်။ အိမ်နှင့်နီးစပ်သောပြင်ပလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်သင်သည်အပြည့်အဝမမောနိုင်ပါ။ တောင်တက်လမ်းများ၊ တောင်တက်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ပင်လယ်ကမ်းခြေကင်များ၊ အများသုံးရေကန်များ၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း၊
ဟောင်ကောင်သည်အာရှ၏အချက်အချာမြို့တော်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကျော်ကြားသည်။ သင့်ကိုကြည့်ရှုရန်စားသောက်ဆိုင်ပေါင်း ၁၁၀၀၀ ကျော်နှင့်လုံး ၀ မဆာလောင်နိုင်ပါ။
ဟောင်ကောင်ရှိအစားအစာများကိုပြောင်းလဲပြီးအိန္ဒိယ၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်နှင့်လက်ဘနွန်၏ကန့်သတ်ချက်များအနက်အမေရိကန်၊ အီတလီနှင့်ပြင်သစ်ကဖေးများကဲ့သို့စားသောက်ဆိုင်များကိုရှာဖွေရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာတစ်ဒေါ်လာသို့မဟုတ်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသော Michelin ကြယ်ပွင့်စားသောက်ဆိုင်များသို့သွားသောလမ်းအစားအစာကိုသင်ပျော်မွေ့နိုင်သည်။ အချို့လူများကအစားအစာကိုမြို့တော်သို့သွားရန်အကြောင်းပြချက်ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။
မော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည်သည်ယနေ့ခေတ်တွင်ပြီးပြည့်စုံပြီး၊ သင့်အား A မှ B သို့ရရန်အတွက်ကုန်ကျစရိတ် နည်း၍ သင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကုန်ကျရန်ဆုံးဖြတ်ချက်များစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင်အငှားယာဉ်များ၊ MTR (ပြွန် / မက်ထရို)၊ ကေဘယ်လ်ကားများနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ပါ ၀ င်သည်။ ဟောင်ကောင်မော်တော်ယာဉ်ဘောင်သည်အတော်လေးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောကြောင့်ပတ်ပတ်လည်သွားလာရန်အလွန်အထောက်အကူပြုသည်
ဟောင်ကောင်ရှိအခွန်သည်နိမ့်ကျပြီးတစ် ဦး ချင်း ၀ င်ငွေခွန်မှာ ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ နေထိုင်သူနှစ် ဦး နှင့် ex-pat များသည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား ၂ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ၀ င်ငွေခွန်သို့မဟုတ်အခွန် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းစံနှုန်းဖြင့်မှီခိုသည်။ နိုင်ငံခြားမှမရေမတွက်နိုင်သောကျွမ်းကျင်သူများသည်ဟောင်ကောင်သို့အဘယ်ကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ရသည်ကိုနားလည်ရန်မခက်ခဲပါ။
ယခင်ဟောင်ကောင်ရှိကွန်ယက်ဟောင်းသည်အံ့ ingly စရာကောင်းလောက်အောင်အိမ်နီးနားချင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များအားလုံးအတွက်နားမလည်နိုင်အောင်စည်းရုံးခြင်းနှင့်မရောနှောခြင်းများဖြစ်သည်။ သင်၏အဖော်အဖက်အသစ်များပြုလုပ်ရန်၊ သင်၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှသူငယ်ချင်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်သို့မဟုတ်နှိုင်းယှဉ်သောအကျိုးစီးပွားရှိသောသူကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သောအခွင့်အလမ်းတစ်ခုတွင်အတူတကွသင်စုရုံးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ Mingling သည်နေထိုင်မှု၏အဓိကအပိုင်းဖြစ်ပြီးလူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်တွေ့ဆုံရန်ထူးခြားသောနည်းလမ်းမှာဟောင်ကောင်အားကစားကလပ်တစ်ခုနှင့်ထိတွေ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဟောင်ကောင်ရှိ ၀ န်ထမ်းများနှင့်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးအတွက် FDM သည်လနှင့်တစ်လအခမ်းအနားများကိုကျင်းပကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မမေ့သင့်ပါ။
ဤအာရှမြို့တွင်နေထိုင်ခြင်းသည်တကယ့်ကိုအစပြုနိုင်သောတွေ့ကြုံမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဟောင်ကောင်ရှိလူတစ် ဦး ချင်းစိတ်ကျေနပ်မှုသည်မြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းများထက်သာလွန်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည့်အကြောင်းပြချက်နှစ်မျိုးသာရှိသည်။
Residency အတွက် Hong Kong အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ ဟောင်ကောင်
လူနေမှု7နှစ်ပြီးနောက်
PR စနစ်နှင့်အတူ7နှစ်အကြာတွင်
အစိုးရမှပေါက်ဖွားစေသောအစီအစဉ်များ (သို့) အခြားနယ်ပယ်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကျောထောက်နောက်ခံပြုခဲ့သည်
အဘယ်ကြောင့်ဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ဘို့သွားရ
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဘဏ္centersာရေးစင်တာတစ်ခုမှာဟောင်ကောင်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်၎င်းကိုလျင်မြန်စွာကြီးထွားနေသောစီးပွားရေးရှိသည်ဟုမှတ်ယူသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာဟောင်ကောင်အစိုးရအနေဖြင့်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများတွင်အများဆုံးထောက်ခံမှုနှင့်အနည်းဆုံးကြားဝင်စွက်ဖက်မှုမူဝါဒတစ်ခုကိုကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပထဝီနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုများကြောင့်ဟောင်ကောင်သည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲတရုတ်စျေးကွက်၏တံခါးပေါက်ဖြစ်သည်ကိုဖော်ပြရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထို့အပြင်ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီများသည်ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်း ၀ င်ငွေအပေါ်အခွန်မပေးဆောင်ပါ။ အလွန်နိမ့်သောအခွန်နှုန်းသည်ဟောင်ကောင်မှရရှိသောအမြတ်အစွန်းများနှင့်သင့်လျော်သည်။ ဟောင်ကောင်ရှိစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်လျင်မြန်။ ထိရောက်သောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ရနိုင်သည်။ နောက်ထပ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလိုအပ်ချက်မရှိဘဲချက်ချင်းမိသားစုဝင်များလည်းရထိုက်ခွင့်ရှိသည်။
သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဗီဇာရရှိပြီးပါကသင်၏အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်လက်မထပ်ရသေးသောအသက် ၁၈ နှစ်အောက်ကလေးများသည်သင်နှင့်ဟောင်ကောင်တွင်နေထိုင်နိုင်သည်။ သင်အမြဲတမ်းနေထိုင်သူတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်နှင့်သင်နှင့်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်၏အသက် ၆၀ ကျော်မိဘများသည်သင်နှင့်အတူနေထိုင်ရန်မှီခိုသောဗီဇာအတွက်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
Residency ဟောင်ကောင်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် insite
အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်အလွန်တိုတောင်းသောအပြောင်းအလဲနဲ့အချိန်ရှိပါတယ်: ပုံမှန်လျှောက်လွှာ 2-3 လအတွင်းခွဲဝေချထားပေးသည်။ သင်၏စီစဉ်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်ပြရန်မလိုပါ။ မည်သည့်ပညာရေးဆိုင်ရာအရည်အချင်းကိုမဆိုတင်ပြရန်မလိုပါ။ သင်၏သက်တမ်းအတွင်းဟောင်ကောင်တွင်သင်ကိုယ်တိုင်ထောက်ပံ့ရန်သင့်တွင်ငွေရေးကြေးရေးအရင်းအမြစ်များရှိကြောင်းအထောက်အထားပြရန်လိုလိမ့်မည်။ ဟောင်ကောင်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်အများပြည်သူအကူအညီရယူရန်သင့်အားခွင့်မပြုပါ။ ၇ နှစ်ကြာယာယီနေထိုင်ခွင့်ရပြီးနောက်သင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေထိုင်ခွင့်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီရန်အတွက်အနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၃ သန်းကိုအောက်ဖော်ပြပါတစ်ခုသို့မဟုတ်အစုရှယ်ယာများ၊ ကြွေးမြီအာမခံများ၊ အပ်ငွေများ၊ သင်၏ဟောင်ကောင်ရှိနေထိုင်မှုသည်တရား ၀ င်ပါကသင်၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုထိန်းသိမ်းထားရမည်။ သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးသည်မူလရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့်ပမာဏထက်လျော့နည်းသွားပါက၎င်းကိုဖြည့်ရန်မလိုပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ စျေးကွက်တန်ဖိုးသည်မူလပမာဏထက်များနေသရွေ့မည်သည့်အရင်းအနှီးမှရရှိခြင်းကိုထုတ်ပစ်ရန်သင့်ကိုခွင့်မပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် ဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များအားဖြင့် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ဟောင်ကောင်များအတွက် ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုဟောင်ကောင်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအထောက်အပံ့၊ ဟောင်ကောင်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဟောင်ကောင်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်မှ Golden Visa ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ကန့်သတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပဲဟောင်ကောင်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသာဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်မှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကူညီသည်။ ဘဏ္planningာရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားအရာများစွာပါဝင်သောဟောင်ကောင်သို့မဟုတ်ကမ်းလွန်ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်အခြားအရာများအတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်ဟောင်ကောင်အဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ဟောင်ကောင်အတွက်ဟောင်ကောင်အတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ၊ ဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်၊ ဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်နှင့်ဟောင်ကောင်အတွက်လူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီများ
ဟောင်ကောင်မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ ခုသို့ဟောင်ကောင်ရှိရွှေဗီဇာ။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဟောင်ကောင်မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။
ဟောင်ကောင်မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
စီးပွားရေးကို အခြေခံ၍ ဟောင်ကောင်မှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချခြင်း။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဟောင်ကောင်ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဟောင်ကောင်မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း။
ဟောင်ကောင်မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ဟောင်ကောင်မှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအထိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ်ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ကောင်းမွန်သောအမြတ်အစွန်းရရှိသင့်သည်ဟူသောအမြင်ဖြင့်ဟောင်ကောင်ရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုထောက်ပံ့မှုပေးသည်။ သူတို့ကသူတို့နေထိုင်ရာအတွက်ဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သူတို့နေထိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှထွက်ခွာလိုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဟောင်ကောင်ရှိကောင်းသောအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးဟောင်ကောင်ရှိကောင်းသောနေရာများတွင်အကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိထားသည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဟောင်ကောင် Residency
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေရှေ့နေကဟောင်ကောင်အတွက်နေထိုင်ခြင်းသည်သင်၏အောင်မြင်သောနေထိုင်မှုအတွက် Hong Kong သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်ကောင်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ဟောင်ကောင်သို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency ကိုဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဖောက်သည်များထံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်အကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်အစီရင်ခံစာကိုအစပြုသည်။
ဟောင်ကောင်အတွက်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency နှင့်အတူဟောင်ကောင်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များနှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် Apostille ဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ဟောင်ကောင်နှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖြည့်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားဟောင်ကောင်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့် Residency ကိုထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များအားဟောင်ကောင်မှဟောင်ကောင်သို့လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများအားကမ်းလှမ်းခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖြင့် ဟောင်ကောင်တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်ရှိသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားစက်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ဟောင်ကောင်ရှိတရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ဟောင်ကောင်များအတွက် ဟောင်ကောင်ရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဟောင်ကောင်ရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်ခြင်း၊ ဟောင်ကောင်တွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့တွင်လုပ်ကိုင်နေသောဟောင်ကောင်အတွက်တစ် ဦး ချင်းအားဟောင်ကောင်အားထောက်ပံ့မှုမရပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ဟောင်ကောင်များအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ဟောင်ကောင်များအတွက် ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိသူတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဟောင်ကောင် ဟောင်ကောင်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် ဟောင်ကောင်ရှိရှေ့ရပျ ဟောင်ကောင်ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ဟောင်ကောင်နှင့် KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျသေချာစေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်အတွက်ဟောင်ကောင်အာဏာပိုင်များကငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် ဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
International Residency မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်ဟောင်ကောင်၏တရားဝင်လိုအပ်ချက်များကြောင့်ကျွနု်ပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဟောင်ကောင်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ဟောင်ကောင်အတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုဟောင်ကောင်သို့ထောက်ပံ့ကူညီခြင်းဖြင့် dual Residency နှစ်နှစ်အတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။
ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသောဟောင်ကောင်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများနှင့်ဟောင်ကောင်အတွက်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ၏အတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။
သင်၏ Residency သည်ဟောင်ကောင်မတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ဟောင်ကောင်အားစီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့အတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများရှိပြီးဟောင်ကောင်အပါအ ၀ င်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကူညီပေးနေသည်။
အကယ်၍ ဟောင်ကောင်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏ Residency ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံ ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကို Hong Kong သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ
Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့်အသက်အရွယ်များပါအသေးစိတ်ကိုဖြည့်ပါ။ ဟောင်ကောင်အတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ဟောင်ကောင်နှင့်အခြားစွဲချက်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ဟောင်ကောင်များအတွက်
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူဟောင်ကောင်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဟောင်ကောင်တွင်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်တွင်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
Residency မှလွဲ၍ ဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်အကြံပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်ကောင်တွင်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းပေးသည်။ ၎င်းကိုဟောင်ကောင်ရှိအခြားအတိုင်ပင်ခံများမှပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဟောင်ကောင်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းဖြစ်စေသည့်ဆိုင်ဖွင့်စေသည်။ ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ Residency ကို ကျော်လွန်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်ကောင်နှင့်နိုင်ငံတကာမှကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်အဆက်အသွယ်များနှင့်အတူဟောင်ကောင်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်ကူညီသည်။
Hong Kong ရှိကုမ္ပဏီ
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင် သို့မဟုတ် Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပိုမိုသက်သာသည်။ )
ဟောင်ကောင်သို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချသူမည်သူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ဟောင်ကောင်ရှိကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, ဟောင်ကောင်အတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် ဟောင်ကောင်ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းနည်းများ ဟောင်ကောင်ရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် ဟောင်ကောင် အကယ်၍ မင်းအစီအစဉ်ဆွဲမယ်ဆိုရင် ဟောင်ကောင်ရှိလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် ချက်ချင်းစတင်ဟောင်ကောင်အတွက်။
ဟောင်ကောင်ရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ ဟောင်ကောင်ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် နေရာလွတ်ဟောင်ကောင်တွင် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဟောင်ကောင်အတွက် Virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
ဟောင်ကောင်အတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ ဟောင်ကောင်များအတွက်ကို virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းအင်း, ဟောင်ကောင်အတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
ဟောင်ကောင်ရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
Residency ပြီးနောက် Hong Kong သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်၊ အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဟောင်ကောင်.
အောက်ဖော်ပြပါ IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုဟောင်ကောင်တွင်ပေးသည်
ဟောင်ကောင်ရှိ Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဟောင်ကောင်ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဟောင်ကောင်ရှိ App Development
ကျွန်ုပ်တို့သည်တရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ကိုဟောင်ကောင်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုဖြင့်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဟောင်ကောင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ဟောင်ကောင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ဟောင်ကောင်တွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များထားရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုပေးအပ်သည့်ဂုဏ်သတင်းရှိသည်။ ဟောင်ကောင်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်သူတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုများနှင့်အတူဟောင်ကောင်အတွက်အတွေ့အကြုံ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ဟောင်ကောင်တွင်နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ရှိသည်။
Residency သည်ဟောင်ကောင်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကသင်၏ကိုယ်စားဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးအတွက်ဟောင်ကောင်အတွက်ရှေ့နေသည်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဟောင်ကောင်သို့ရောက်ရှိလျှင်သို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်သို့သွားရန်စီစဉ်ထားပါကသင်၏ရှေ့နေအားဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဟောင်ကောင်အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင်၏ဟောင်ကောင်တရားရုံး၏တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ကိုတရား ၀ င်တရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်သည့်နိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးမှတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။
အမေးများသောမေးခွန်းများ - ဟောင်ကောင်၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ခြင်း
စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ဟောင်ကောင်စီးပွားရေးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဟောင်ကောင်၏နေထိုင်မှုကိုဟောင်ကောင်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ ဟောင်ကောင်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ခွင့်ဖြင့်ဟောင်ကောင်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုဟောင်ကောင်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ဟောင်ကောင်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်းနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်းအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဟောင်ကောင်ရှိအေးဂျင့်များနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
ဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့် ဟောင်ကောင်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခွင့် ဟောင်ကောင်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်မှု | ဟောင်ကောင်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှနေထိုင်ခွင့် | ဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၏နေထိုင်မှု
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဟောင်ကောင်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်ဟုဟောင်ကောင်ရှိစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ဟောင်ကောင်စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဟောင်ကောင်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဟောင်ကောင်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားရန်၊ ဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားခံယူထားသည့်ဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဟောင်ကောင်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဟောင်ကောင်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားတို့ကိုလျှောက်ထားပါ။ ဟောင်ကောင်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများအတွက်ဟောင်ကောင်အတိုင်ပင်ခံများ။
စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု ဟောင်ကောင်ရှိလူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာရှေ့နေများ | စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ | စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ | စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံဟောင်ကောင် | ဟောင်ကောင်အတွက်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ဟောင်ကောင်၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုခြင်းအားဖြင့်ဟောင်ကောင်၏တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်းစသည်တို့ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ ဟောင်ကောင်၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်ဟောင်ကောင်အတွက်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အကောင်းဆုံးဟောင်ကောင်တို့မှထောက်ခံသောဟောင်ကောင်အတွက် ဟောင်ကောင်ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
ဟောင်ကောင်အတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု ဟောင်ကောင်ရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ဟောင်ကောင်ရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဟောင်ကောင်ရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဟောင်ကောင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ အိမ်ခြံမြေစသည်ဖြင့်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ဟောင်ကောင်စီးပွားရေးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဟောင်ကောင်၏နေထိုင်ခွင့်ကိုရရှိခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ ဟောင်ကောင်ရှိရွှေဗီဇာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ဟောင်ကောင်ရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်ဟောင်ကောင်အတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများမှတဆင့်ဟောင်ကောင်အတွက်ထောက်ပံ့ကူညီခြင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
ဟောင်ကောင်အတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ဟောင်ကောင်ရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ဟောင်ကောင်ရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဟောင်ကောင်ရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဟောင်ကောင်အတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ဟောင်ကောင်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ဟောင်ကောင်အားတရားဝင်အထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဟောင်ကောင်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်ဟောင်ကောင်ရှိအေးဂျင့်များသည် Residency ကိုဟောင်ကောင်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
Residency သည် Hong Kong သို့ Residency နှင့် Residency ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်မြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဖြစ်သည်။ Residency အတွက် Hong Kong သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခကိုသာပေးသည်။ Residency အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြေများအားလည်းထောက်ပံ့ပေးသည်။
မည်သည့်နိုင်ငံသားများသည် Residency လျှောက်ထားခြင်းကိုဟောင်ကောင်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဗီဇာလျှောက်ထားနိုင်သနည်း။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုမည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအနည်းငယ်မှ Residency သည်အာရှမှဟောင်ကောင်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ Residency သည်အာဖရိကမှဟောင်ကောင်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ Residency Residency ဥရောပမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Residency၊ Residency ဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့ဖြစ်သည်။ တောင်အမေရိကမှ၊ မလေးရှားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ မလေးရှားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှဟောင်ကောင်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အင်ဒိုနီးရှားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ Residency၊ သီရိလင်္ကာမှဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ Residency၊ နီပေါမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Residency၊ အိန္ဒိယမှဟောင်ကောင်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှုနှင့်ယူအေအီးမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု ဟောင်ကောင်များအတွက်
Residency တွင် Hong Kong ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အရေးကြီးသောအသုံးအနှုန်းများ
link ကိုမှ ဟောင်ကောင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ဟောင်ကောင်ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာဝန်ရှိသည်